Vaovao sy maresaka any Dago – Gasy Egypte
May 24, 2019 May 24, 2019 Mihaja Rasoanaivo
« Tsy toa ireo Malagasy monina any an-tanindrazana maharaka akaiky ny tranga sy ny zava-miseho ny Malagasy monina aty ivelany. Ao ireo sahirana amin’ny asa aman-draharaha, ny fianarana ihany koa hany ka mahalàna vao maka fotoana hanarahana ny vaovao any Madagasikara na manontany ireo havana aza moa ny ankamaroany.”
Misy ny vaovao izay tsara ho fantarina ihany anefa sy tena nisongadina, toy ireto manaraka ireto:
Hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka ny 27 Mey 2019, izany hoe ny alatsinainy ho avy izao. Mitarika resa-be ankehitriny ny tena andraikitra tokony sahanin’izany “Député” izany. Mbola maro ireo mieritreritra fa izy ireo dia natao handray andraikitra eny ifotony ka hanamboatra na hanatsara ny fiainan’olona tany amin’ny faritra nahalany azy izay tena diso tanteraka. Ny kandidà nirotsaka ihany koa moa dia tsy menatra manentana fa hanao an’izao e… hanangana an’izao e. Mila tsiahivina fa hanao lalàna hiarovana ny tombotsoan’ny vahoaka no antony hifidianana solombavam-bahoaka. Ohatra tsotra indrindra no raisina dia toy izao: “Te hijery akaiky ny mahakasika ny fahasalamam-bahoaka ny député iray. Tsy ny fananganana hopitaly na CSB II no asany fa ny miady hevitra sy mitolona eny amin’ny lapan’ny Tsimbazaza mba handaniana ny lalàna mahakasika ny fahazoan’ny olom-pirenena tsirairay mitsabo-tena maimaim-poana any amin’ny hopitalim-panjakana rehetra manerana ny nosy na toy ireny antsoina hoe protection et assurance sociale ireny”
Andro tsy fiasana kanefa andraisan-karama ny 4 Jiona 2019 ho fankalazana ny fetin’ny “Eid” nohon’ny fahavitan’ny volana Ramadany. Tsiahivina fa voalohany eo amin’ny tantara izany ary mivohy ny hevitry ny tsy fanavakavahna eo amin’ny samy Malagasy.
Tafiditra ao anatin’ilay tetik’asa Plan Sectoriel de l’Education (PSE) novolavolain’ny ministeran’ny fampianarana fa manomboka ny taom-pianarana manarak’izao dia telo ihany ny safidy rehefa hiditra hianatra eny amin’ny lisea ka hahazoana ny mari-pahaizana BAC avy eo: Littéraire (L), Scientifique(S), Organisation, Société et Economie (OSE). Tsy fantatra mazava raha foana ihany koa na mbola hisy ihany koa ve ny lisea teknika toy (BTP, Elec na Gestion) noho ity fiovana eo amin’ny sehatry ny fampianarana ity.
Nosantarin’I filohan’ny Repoblika tany Tsiroanomandidy ny tetik’asa nampanantenainy tamin’ny fampielezan-kevitra dia ilay resaka “puce électronique ho an’ny omby”. Injeniera sy teknisianina Malagasy no nanao izany ary afaka ireharehantsika tokoa ny fahaizan’izy ireo. Ity dia natao indrindra hanamora ny paik’ady iadiana amin’ny asan-dahalo.
Niakatra ho 200.000Ar ny karama farany ambany tokony ho raisin’ny mpiasa tsirairay indrindra ireo miasa eo amin’ny sehatra tsy miankina raha toa ka 160.000Ar izany teo aloha. Tsy hakana hetra ihany koa ny karama latsaky ny 350.000Ar. Inoana ary antenaina fa hanatsara ny fari-piainan’ny vahoaka Malagasy izy ity.
Tamin’ity volana Mey ity ihany koa dia nisy ny fankalazana ny herinandron’i Eoropa ho fampirantina ireo hetsika sy vondrona rehetra vatsian’ny vondrona Eoropeanina vola any Madagasikara (7 Mey 2019). Ny ady amin’ny fahantrana no tena imasoan’izy ireo fa amin’ity taona ity dia nampanantena famatsiam-bola ho an’ny sehatry ny fahasalamana sy ny angovo ihany koa izy ireo. Ho an’ireo mitaza-maso dia mihatsara ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny roa tonta ka antenaina fa hisy vokany tsy ho ela eo amin’ny fiainan’ny vahoaka Malagasy.
Tetik’asa antsoina hoe FIHARIANA, fanolorana fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana ho an’ireo tanora manana tetik’asa. Izany dia natao indrindra hanohanana ny tanora hanangana sy hanorina ny orinasany manokana. Mitentina hatramin’ny 200 miliara Ariary ny vola natokana ho an’ity tetik’asa ity. Sehatra iray tena mijery manokana ny fampandrosoana indrindra ho an’ireo tanora Malagasy ary azontsika tsidihina amin’ny alalan’ny tranokalam-pifandraisana natokana ho an’ity tetik’asa ity moa ny fanazavana mahakasika izany.
Hitsidika an’I Madagasikara ny Papa François ny 8 septambra 2019. Misy ny foto-drafitr’asa natsangana manokana antsoina hoe “Soa mandrakizay” handraisana ny lamesa lehibe ho tontosaina amin’io fotoana io. Ny filoham-pirenena mihintsy no nidina ka nijery ifotony ny fizotry ny asa tamin’ity volana ity ary miroso faran’izay aingana tokoa izany.
Tao anatin’ny roa herinandro nifanesy dia nivoaka matetika an-gazety indray ity: afera Claudine Razaimamonjy. Mbola any am-ponja izy raha ny loharanom-baovao saingy voarohirohy amin’ny halatra sy fanodikodinam-bolampanjakana mitentina 18 miliara indray ny tenany. Tsy hay raha mbola hitohy ny fanadihadiana ataon’ny BIANCO satria hiova tsy ho ela ihany koa ny tale jeneraliny ny 23 jiona ho avy izao.
Malaza manerana ny nosy ihany koa ny akon’ny hetsika TAGNAMARO. Firotsahana an-tsitrapo ataon’ny olom-pirenena iray mahatsapa tokoa fa manana andraikitra sy afaka mitondra ny anjara birikiny ho fanatsarana sy fanarenana indray ireo rava na simba eo amin’ny fiaraha-monina, ny toeram-piasana, ny sekoly, … Mahomby tanteraka ary am-pitiavana ny fanatanterahana azy.